Nagu saabsan - Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co., Ltd.
Waa maxay sababta Huayuemei Laydhka
Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co., Ltd waxaa la aasaasay 2006. Huayuemei Laydh oo ah soo saaraha Xirfadlaha LED Light Strip, Ku takhasusay naqshadaynta, soo saarista iyo qaybinta 10 sano. Iyada oo leh 2,300 sqm oo xarumo wax soo saar ah Guangzhou, Shiinaha.
Waxaan ku leenahay faa iidada weyn qaabeynta iyo khibrada wax soosaarka, aqoon isweydaarsiga, fududeynta, kooxda iibka.
Mabda ': Tayo wanaagsan iyo qiimo tartan, qiimo weyn ugu fadhiya macaamiisha.
Fikradda badeecaddu waa midda ugu waxqabadka badan, rafcaanka, iyo wax soo saarka qiimaha leh (LED Strip Light).
Waxaan sidoo kale aqbalnaa amarada OEM ee macaamiisha baahida gaarka ah. Waxaan si joogto ah u sii wadi doonnaa soo saarida wax soo saar cusub, kor u qaadista tayada wax soo saarkeena iyo hagaajinta adeegyadeena.
Waxaan haynaa koox xoogan oo amarkaaga ka dhigaysa mid wax ku ool ah, macaamiilna ku keenaya waqtiga. Waxaan sidoo kale leenahay heer wax soo saar aad u adag, hubi in dhammaan sheyga si wanaagsan looga sameeyay iskuxir kasta oo silsilad wax soo saar ah.
Huayuemei waa aqoonyahano xirfadlayaal u ah LED Strip Light inta badan oo ay ka mid yihiin Backlight LED Strip Light, Edge-lit LED Module Bar, Flexible / Rigid LED Strip Light, Lightlight LED Module, waxaan ka shaqeyneynay Laydhka LED-ka ee Shiinaha in ka badan 10 sano. Waxaan sidoo kale helnay ikhtiyaarro loo habeeyay si aan uga caawino macaamiisha sidii ay ugu fiicnaan lahaayeen silsiladdooda sahayda ee marinno kala duwan.
Kooxdayada iibka waxay ku dadaalayaan inay ku qanciyaan macaamiisha adeegyo aad u fiican. Intaa waxaa dheer, iyada oo ku saleysan xiriirka dhow ee aan la leenahay macaamiisha, waxaan had iyo jeer ka heli karnaa macluumaadka gacanta ugu horreysa suuqa oo waa loo habeyn karaa iyadoo la raacayo codsashada gaarka ah ee macaamiisha. In ka badan 10-sano koritaan, waxaan ku soo aragnay ODM iyo sidoo kale OEM. Iyada oo wax soo saarkeena iyo adeegyadeena caymiska ah, waxaan la dhignay iskaashi ganacsi oo wanaagsan macaamiisha ku sugan suuqa gudaha iyo dibaddaba si diiran ayaa loo soo dhaweynayaa. Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah waxyaabahayaga ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Waxaan rajeyneynaa inaan kulashaqeyno mustaqbalka dhow.
Tayada & Shahaadooyinka
Waxaan soo saarnaa gudaha si aan u damaanad qaadno tayada ugu sareysa. Iftiinkeena LED Strip waa CE, Rosh iyo UL oo shahaado haysta.
Fudeydku waa mantraheena. Xalalkayagu way fududahay in la rakibo, way fududahay in la soo saaro oo si fudud loo maareeyo. Annaguna waxaannu ku samayn doonnaa sidaad u codsatay inaan kuu samaynno xalka ugu fiican adiga.
Huayuemei Laydhku waa shirkad horumarineed oo wax soo saar & shirkad ganacsi u leh baahiyahaaga oo dhan. Hal-abuurka ayaa na wada oo na dhiirrigeliya.
Kooxdayada R & D ee gudaha ku jira waxay baaraan isbeddellada cusub waxayna soo saaraan alaabooyin cusub oo waaxda ah.
Waxaan khubaro ku nahay soo saarista ballaaran mahadnaqaya 2,300 sqm oo xarumo wax soo saar ah oo ku yaal Guangzhou, Shiinaha.
Adeegyada Iibinta Kadib
Waxaan ku siin doonaa adeegyo tayo-sare leh oo ugu fiican.
Iyadoo in ka badan 14 sano oo waayo-aragnimo ah, waxaan ku leenahay macaamiil ka badan 130 dal iyo in ka badan 4,500 magaalo.